Nuur Cadde oo la filayo inuu Saacad ka dib Muqdisho soo gaadho | maakhir.com
Nuur Cadde oo la filayo inuu Saacad ka dib Muqdisho soo gaadho
Mudisho:- Raisalwasaaraha Somaliya Nuur Xasan Xuseen ayaa waxa la filayaa inuu saacadaha soo socoda uu soo gaadhi doono magaalada Muqdisho,isaga oo ka soo boqoolay maalada Baydhabo ee fadhiga u ah Baarlamaanka Somaliya, Raisalwasaaraha lama sheegin cid safarkiisaa ku wa helisa,walaw ay wararka qaar sheegayaan inay la socdaan xubno ka tirsan baarlamaanka.
Raisal wasaaraha ayaa waxa la sheegay in aad loogu diyaar garoobay imaatinkiisa ku aadan magaalada Muqdisho iyada oo dhamaan wadooyinka oo dhan la xidhay waxa lagu arki karayaa Agagaarka Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cade ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo sugaya Amaanka.
Sdia ay noo xaqijiyeeyn qaar ka mid ah saraakiisha cidamada waaxda socdaalka ra’iisul wasaaraha waxaa lafilayaa in ay garoonka muqdihso oo uu kasoo dagayo ay ku soo dhaweeyaan mas’uuliyiin katirsan Dolwada iyo saxaafada gudaha iyo dibada kuwasi oo ku sii qulqulaya garoonka diyuuradaha Aadan Cade ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho.
Waa safarkii ugu horeeyay ee Raisalwasaaruhu ku yimaado Muqdisho tan iyo intii loo dhaariyay Xafiiska Raisalwasaaranimo ee Dalka Somaliya isaga oo inta badan uu Nuur Cade ku sugnaan Xarunta Baarlamaanka Somaliya ee Baydhabo.
Dadka ka faalooda Siyaasada Somaliya ayaa sheegaya in imaatinka Raisalwasaare Nuur Cade ee magaalada Muqdsiho ay baajin karto dagaalo sii xoogaysta ee ka soo socda gudaha Muqdisho, isaga oo dhawor jeer ku cel celiyay Nuur Cade in marka uu Muqdisho gaadho uu kulan dheer la qaadan doono dhamaan qayba kala duwan ee Bulshada rayidk ah.
« Diyarad ayaa ku soo dhacday Buuralayda Dalka Angola
Wiil uu dhalay Usaama oo sheegay inuu wado Fariin Nabad ah »